Indima: Iindidi, iimpawu, ukusetyenziswa kunye novavanyo -Ikaro
yokuqalisa >> Izinto >> Papel
Iphepha lezinto ezinokubhalwa phantse iminyaka engama-2000 yembali. Abantu abaninzi bayinxibelelanisa neencwadi, amaphepha kunye neencwadana. Kodwa kukho okungakumbi emva kwayo.
Yinto endiyithandayo, ndiyayithanda indlela ebhalwe ngayo iphepha elilungileyo, yichukumise, uyijoje kwaye usebenze nayo. Iphantsi.
Zininzi iintlobo zamaphepha aneempawu ezahlukeneyo kwaye sinokuwasebenzisa ngeenjongo ezahlukeneyo, xa sisenza isafobe i-origami okanye i-origami ukuyisebenzisa njengezinto zokwakha izinto ezahlukeneyo.
Kweli candelo siza kushiya ulwazi oluninzi malunga nephepha, imbali yalo, indlela elenziwe ngayo, indlela elenziwe ngayo, iintlobo ezahlukeneyo ezikhoyo, ukusetyenziswa ongazange wakucinga okanye wakucinga, kodwa ngaphezulu kwazo zonke iimvavanyo ozenzayo iphepha. Impumelelo kunye neempazamo ekusetyenzisweni kwephepha
Ndiyathemba ukuba uyayonwabela njengam.
Iphepha elenziwe ngokutsha
Le yindlela elula kwaye phantse naliphi na iphepha linokuphinda lisetyenziswe kwakhona.
Amaphepha acetyiswayo kakhulu ngala:
Iifom eziqhubekayo (zilunge kakhulu kuba ziyaxhathisa kuba zinemicu emide).
Iphepha elibrown elisetyenziselwa ukusongelwa (ngaphandle kokuba linesixa esikhulu semicu yomthi)
Iingxowa zephepha kunye neemvulophu.
Iphepha sele liprintiwe (nangona kungacetyiswa ukuba kusetyenziswe nayiphi na eninzi kakhulu ).
Ushicilelo lweendaba lunokusetyenziselwa ivolumu, ngaphandle kokuba idityaniswe nezinye izinto.
Gwema amaphepha amenyezelayo namenyezelayo, kuba kusenokwenzeka ukuba agqitywe ngekaolin, enokubangela ukuba kubekho iphepha elinothuli ephepheni.